Re कारण मशीन अनुवाद मानव अनुवादको नजिक छैन Martech Zone
Re कारण मशीन अनुवाद मानव अनुवादको नजिक छैन
मंगलवार, जुलाई 21, 2015 सोमवार, जुलाई 20, 2015 Douglas Karr
वर्षौं पहिले मलाई ती सबै साइटहरू याद छ जुन ती भयानक स्वचालित अनुवाद बटनहरू समावेश गर्दछ। तपाईले अ non्ग्रेजी साइटमा बटन क्लिक गर्नुभयो र यो मुश्किल पढ्न सकिने थियो। सब भन्दा राम्रो परिक्षण अंग्रेजीबाट अर्को भाषामा अनुच्छेद अनुवाद गर्नु थियो ... र पछाडि अंग्रेजीमा पनी परिणाम कस्तो फरक छ भनेर हेर्न।
विन्दुमा केस, यदि मैले पहिलो अनुच्छेद अंग्रेजीबाट स्पेनिशमा अनुवाद गर्छु र फेरि प्रयोग गरेर गुगल अनुवाद्यहाँ परिणाम कस्तो छ:
वर्षौं पहिले, म ती सबै बटनहरू याद गर्दछु जुन भयानक मेशिन अनुवाद सहित थिए। तपाईं अ than्ग्रेजी बाहेकको कुनै साईटमा बटन क्लिक गर्नुहुन्छ र मुश्किल मात्र प्रयोग योग्य हुनुहुन्छ। सब भन्दा राम्रो प्रमाण एउटा अनुच्छेद अ from्ग्रेजीबाट अर्को भाषामा अनुवाद गर्नु थियो ... र त्यसपछि अंग्रेजीमा फिर्ता जानुहोस् परिणाम कस्तो फरक थियो।
एउटा साधारण चरणमा, तपाई हराउनु भएको सटीकता र चिल्लो चरसको अंश देख्न सक्नुहुन्छ। को सीमितता मेशिन अनुवाद ती वर्षहरु को लागी उस्तै हो। मेशिन अनुवादको अभाव छ सन्दर्भ, पार गर्न क्षमता अस्पष्टता, र को अभाव अनुभव। यो मिसिन २०++ वर्षको साथ विशिष्ट क्षेत्र वा शीर्षकमा शिक्षित छैन जुन समयको साथ विकसित भएको छ। शब्दहरू केवल अनुवाद गरिएको हुँदैन, तिनीहरू शीर्षक र लेखक र पाठकको अनुभवमा आधारित हुन्छन्।
अवश्य पनि, एक मानव अनुवादक तपाईंको खल्तीमा फिट हुँदैन, र तिनीहरू सँधै तपाईंसँगै त्यस्तो धेरै प्रामाणिक थाई रेस्टुरेन्ट वा विदेशी छुट्टीमा लैजान सक्षम हुँदैनन्, त्यसैले हामी यहाँ सिफारिस गर्दछौं: जब तपाईंलाई तत्काल परिणामहरू चाहिन्छ, र तिनीहरूले डोन गर्दैनन्। ' t उत्तम हुनुपर्दछ, गुगल अनुवाद प्रयोग गर्न ठीक छ। कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा व्यावसायिक कागजातको लागि, वा केहि पनि सटीक हुनको लागि, मानव अनुवादकहरूसँग टाँस्नु उत्तम हुन्छ।
यहाँबाट एक टु-टु-हेड टेस्ट छ भर्बालिink्क यसले केहि खोजहरू र उत्तम अभ्यासहरू प्रदान गर्दछ मेशिन अनुवाद बनाम मानव अनुवाद.
टैग: गुगल अनुवादगुगल अनुवादमानव अनुवादमेशिन अनुवादमौखिक
तपाईं ग्लोबल मार्केटप्लेसको लाभ लिनुहुन्न
मार्स 7, 2016 मा 8: 14 एएम
चाखलाग्दो र हास्यास्पद !!!! मेरो विचारमा एउटा मेसिनले कहिले पनि मानिसलाई हराउँदैन!